★မြန်မာ့အလင်း★: မြန်မာစကားမပြောတတ်တာ သတိမထားမိအောင် ၂ယောက် စလုံးအသံမထွက်ရဲဘူး .. ၀ါးဟားဟား
မြန်မာစကားမပြောတတ်တာ သတိမထားမိအောင် ၂ယောက် စလုံးအသံမထွက်ရဲဘူး .. ၀ါးဟားဟား
ဟုတ်တယ်ဗျ...........ကျနော်လည်း သိချင်နေတယ်။ဒေါ်စုသား၂ယောက် မြန်မာစကား တတ်သေးလား ......မပြောတတ်တော့ဘူးလား။
မတတ်လည်း ဘာတတ်နိုင်မလဲ ။မြန်မာပြည်ပေါက်ခလေးတွေတောင်
အမေရိကရောက်လို့ ဘိုလို တတ်တာနဲ့
အိမ်မှာတောင် မြန်မာလို မပြောချင်တော့ဘူးဗျို့။
ဘယ်သူ့ ကို အပြစ်ပြော၇မလဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ သူရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ကို မသိအောင် ဖုံးကွယ်မှုတွေလုပ်နေတာ မရိုးသားဘူး။ သူ့သား မြန်မာလိုမတတ်တာကို ဘာလို့ လူသိမခံချင်တာလဲ? သူ့သားမြန်မာလိုမပြောနိုင်တာကို အပြစ်တင်ချင်တယ်မယ်.. ခွင့်လွတ်ချင် ခွင့်လွတ်မယ် . .. အဲဒါကျုပ်တို့တစ်ခုချင်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ တကယ်ရိုးသားရင် လူတွေကို အမှန်အတိုင်းပဲ ပေးသိရမယ်။ ဒီသားအမိသာ ဖုံးကွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်.. မရိုးသားဘူး။
နောက်ပြီး သူမဟာ အသက် ၄၀ အထိ ပြည်ပမှာ နေခဲ့တယ်။ ပြည်ပမှာနေတဲ့ အချိန်မှာ သူ့အကြောင်းအကဲခတ်နိုင်အောင် ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ထုတ်မပြဘူး။ ဒီမိုမီဒီယာတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မြန်မာဆန်ဆန်နေတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ မြန်မာဆန်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သားကို မြန်မာစကားတောင် မသင်ပေးဘူးဆိုပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃- ၄ လလောက်က ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေမှာတော့ မြန်မာဆန်တဲ့ပုံ တစ်ခုမှ မမြင်ပါဘူး။ ဘောင်းဘီတိုတိုနဲ့ လုပ်ကိုင်နေတာပဲမြင်တယ်။ ဘာလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့ဘ၀ အမှန်ကို လူတွေကို ပေးမသိရဲတာလဲ?